Yazvino yekuvandudza kuGoogle Mifananidzo inoita kuti ienderane neFotoScan | IPhone nhau
Yazvino yekuvandudza kuGoogle Mifananidzo inoita kuti ienderane neFotoScan
Zvekare isu tinotaura nezve nyowani yekuvandudza yeGoogle Mifananidzo application, imwe yeanonyanya kushandiswa nevazhinji vashandisi vasingade kana vasingade Apple yeICloud sevhisi. Google Mifananidzo inotibvumidza kuchengeta ese mafoto atinotora neyedu iPhone uye ese mavhidhiyo chero bedzi asingapfuure 4k resolution, zvachose mahara. Asi inotipawo nhamba huru yesarudzo dzekutsvaga chero emifananidzo yatakachengeta, kungave kuburikidza nenzvimbo, kuburikidza nekucherechedzwa kwechinhu, kuzivikanwa kwechiso ... asiwo mushure meiyi yazvino kuvandudzwa inokwanisa kuona ese mapikicha atakatarisa nePhotoScan application, inongowanikwa yeiyo iPhone.
Iyo PhotoScan application, iyo yanga ichiwanikwa muApp Store kwemwedzi mishoma, inotibvumidza isu tarisa pasina kuratidzira iwo mafoto atinayo kutenderera imba yedu. Izvo zvinongozvirimira zvirimwa mapikicha kubvisa iwo micheto, zvinotibvumidza isu kugadzira yakatwasuka uye rectangular scans pamwe nemaonero kururamisa uye nehungwaru kutenderera kuchengetedza iwo mafoto akatwasuka zvisinei kuti takaaongorora sei.
Asi haisiriyo yega novelty iyo ino yekuvandudza nhamba 2.7.0 yeGoogle Mapikicha inounza kwatiri, nekuti nekuwedzera iyo nyowani yakavandudzwa gridhi yekuona yakawedzerwawo kuratidza mapikicha edu akavandudzwa, nyowani yakagadziridzwa zuva ichitsvedza kutonga kuitira kuti irege kuve nyore kufamba kubva pagore kuenda kune rimwe. Kuita, rimwe rematambudziko iro gadziriro yagara iine, yakagadziridzwawo. Ose maGoogle Mifananidzo nePhotoScan anowanikwa mahara kurodha pasi uye kushandisa kuburikidza nehukama panoperera chinyorwa ichi.
FotoScan kubva kuGoogle Mifananidzovakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Yazvino yekuvandudza kuGoogle Mifananidzo inoita kuti ienderane neFotoScan
Shanu inonakidza yechitatu-bato matambudziko kune yako Apple Watch
Mhosva yeApple inopokana neSamsung yekuteedzera dhizaini ye iPhone yakavhurwa zvakare